2011 ဧပြီလကုန် ချဲထွက်ပြီးသည့်ထိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » 2011 ဧပြီလကုန် ချဲထွက်ပြီးသည့်ထိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်း
2011 ဧပြီလကုန် ချဲထွက်ပြီးသည့်ထိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်း
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on May 3, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
တစ်ကယ်တော့ တရားသည်မတရားသည်ကို အသာထားကြလေ
ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် အကြံအဖန်လုပ်ဇာတ်ကြီးကို သိပါလျှက်နှင့် စစ်ဖိနပ်ကိုက်ခြင်သော ပါတီဝင်များ၏ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်
တရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲဟု အထမြောက်သွားသော သမ္မတရွေးပွဲအပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးလိမ့်မည်ဟု
အတိုက်အခံများဘက်က မျှော်လင့်နေကြသော်လည်း ယနေ့( ဧပြီလကုန်ချဲထွက်ပြီးသည့်အထိ ) လွှတ်မပေးသေးပေ။
ဤရက်မတိုင်ခင် မန္တလေးဂေဇက်မှ member ဆူပါ့ဆူပါပလဲဝဲ ( သီးခံပါ ) ဆူပါ့ဆူပါဖိုက်တာ ကို … ကြီးသောကြောင် ..၏
မြေအောင် ၁၁ ဖွဲ့ကလည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည် ဟု
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ၏ http://burmese.bnionline.net/news/mizzima/6983-2011-04-30-00-42-35.html ကို
အင်တာနေရှင်နယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းထောက် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ
ကိုယ်တိုင်သတင်းထောက်ထာသလို ခပ်တည်တည်ဖြင့် တင်ပြထားပါသည်
အစိုးရအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ အမှန်တကယ်သွားလိုကြောင်း ဖော်ပြလိုပါက ပထမဆုံးအဆင့် အနေဖြင့်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ၁၁ ဖွဲ့ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်းသည် ကျန်တဲ့အရေး အားလုံးပါ ယိမ်းယိုင်နေတယ်။
အဲဒီအတွက်နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့အခါမှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးတွေသည် အားလုံး ချွတ်ခြုံကျတယ်။
အဲဒီအတွက် ဒီအရေးတွေ ကောင်းဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အောင် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ၊
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးကြပါလို့ ဦးဇင်းတို့ တိုက်တွန်းတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးမှ ဆရာတော် ဓမ္မသီရိက မဇ္ဈိမကို အမိန့်ရှိသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီလွတ်မြောက်နယ်မြေ ဂျပန်ဌာနခွဲအနေနဲ့စတင်လက်မှတ်စုစောင်းနေတဲ့အကြောင်း ကိုလည်း DVB သတင်းအရသိရှိရပြီး ကျေးဇူးပါ DVB ရေ။
ကျူရှင်ဖွင့်တဲ့ပြင်ပကျောင်းက ကျူရှင်ဆရာတွေကို NLD က ဒီလို campaing လုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့။
လက်မှတ်မထိုးပါနဲ့ နိုင်ငံရေးကင်ရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့ http://burmese.dvb.no/news.php?id=14097 မှာ ဖော်ပြထားပြီး
အင်တာနေရှင်နယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းထောက် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ ဘယ်ဆိုက်မှာ ဘယ်သူတင်ထားသလဲဆိုတာတွေကို
ကုပ်ချောင်းကုပ်ချောင်းဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေ သတင်းထောက်နေပြီး ရရှိပါက အချိန်မှီတင်ပြပေးပါမည်။
မည်သို့ဆိုစေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးကိုတစ်နိုင်ငံလုံး ချဲ့ထွင်းလှုပ်ရှားမည် ဟုလည်း
ထို.. ကို…ကြီးသောကြောင် ၏လှုပ်ရှားမှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အောင်မြင်မှုဟု ဆိုနိုင်မည်လားမသိပေ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်
အကျဉ်းသား အချို့ ပြန်လွှတ်ပေး မည် ဟု စစ်အစိုးရ အတည် ပြု ပြောကြား ဆိုသောသတင်းတစ်ပုဒ်ကို
မြန်မာ စစ်အစိုးရက ကျောက်ထောက် နောက်ခံ ပြုထားသည့် ပုံစံသစ် စစ်အစိုးရ တစ်မျိုးက
အကျဉ်းသား အချို့ ကို ပြန်လည် လွှတ်ပေး မည် ဟု ယနေ့ အတည် ပြု ပြောကြား လိုက်သည်။
ထို အထဲ တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကို မူ သေချာစွာ ထည့်သွင်း ပြော
ကြား မရှိ ဟု Freedom News Group မှ သတင်း ရရှိသည်။
လက်ရှိ သမ္မတ ဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန် က ကြာသပတေး နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အရှေ့ တောင် အာရှ
နိုင်ငံ များ အသင်း (အာဆီယံ) ၏ အစည်း အဝေး မတက် ရောက် မှီ ယခုကဲ့ သို့ အစိုးရ တာဝန်
ရှိသူ တစ်ဦး မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား ၂၂၀၀ ကျော် ခန့် ရှိ ပြီး အများစု မှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်
များ ကျခံနေရပြီး ထောင် ထဲ တွင် အကျဉ်းသား အခွင့် ရေး များ ဆုံး ရှုံးနေကြသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် က အကျဉ်းသား များ ပြနလည် လွှတ်ပေး ရာ တွင် နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်း
သားများ ကိုမူ အနည်းစု သာ လွှတ်ပေးသည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်
အာဏာရယူ ပြီး ချိန် တွင် ဗိုလ်ကြီး ဟောင်း နေမျိုးဇင် စသည့် နိုင်ငံရေး ၊လူမှု ရေး လှုပ်ရှား သူ အချို့ 
ကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီး ဧပြီ လ အတွင်း အနည်း ဆုံး နိုင်ငံ ရေး လှုပ်ရှားသူ အယောက် ၂၀ ခန့် ကို
ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း FNG မှ သိရှိရသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် Just D0 It အဖွဲ့ က ယခု နှစ် ဧပြီ လ ၉ ရက် ဦးသိန်းစိန်
အာဏာရရှိ ပြီး ၁၀ ရက် အကြာတွင် တောင်း ဆို ခဲ့ကာ နောက် ပိုင်း တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်
အပါအ၀င် ပြည်တွင်း နိုင်ငံ ရေး လှုပ်ရှား သူများက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက် ရေး အတွက်
လက်မှတ် ထိုး တောင်း ဆိုမှု လှုပ်ရှားမှု ကို အရှိန် မြှင့် လုပ်ဆောင် လာခဲ့ကြသာည်။ Political Prisoners
ထိုသတင်းကို Lai အမည်ရှိပရိတ်သတ်တစ်ဦးက ယခင်အဖြစ်အပျက်များကို အခြခံ၍ အားနာပါးနာ အောင်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ချထားပါသည်
( သူတို့နဲ့ဇာတ် တူတဲ့ သူခိုး ဒါးပြတွေ ဘဲ အများဆုံးလွတ်မှာပါ။ ဒါမှအဲ ဒီကောင်တွေ စစ်မှု ထမ်း ခိုင်းမှာ။
ဒါမှ မဟုပ်ရင် ဘယ်က စစ်သား ရတော့မှာလည်း ။ မျက်နှာပြ ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးသမား ၁ယောက် ၂ယောက်တော့ လွှတ်ပေး မှာ သေချာတယ်။ )
မလွှတ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ ဘာဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာကို အခြေနေကြည့်ပြီး
နောင်မျာတွင် ဈေးကွက်အခြေအနေအရ သတင်းများကို ဤသို့သုံးသပ်တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး
ဤသတင်းအား update လုပ်ခြင်း ပွိုင့်တိုးပေးခြင်းများ
ပြုလုပ်မိပါက သက်ဆိုင်သူ admin အနေဖြင့်
ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏ လက်ရှိတည်ဆဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်
ကျွန်ုပ် အင်တာနေရှင်နယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သတင်းထောက် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ
………………………………..အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပရောဖက်ရှင်နယ် သတင်းထောက်
မမန်းနဲ့ဆိုတော့လည်း မမန်းယုံပေါ့ဗျာ… ဟုတ်ဖူးလား ရွာသားတို့ရေ….
ဒီသတင်းသမား ဘာတွေမာန်တက်နေတာလဲ ????
နာဂစ်သုံးနှစ်ပြည့် သတင်းတင်စရာမရှိဘူးလား ?
သတင်း edit လုပ်နေသည် လုံးဝ ဝင်မမန်းရ
ဆိုပြီးသတိပေးထားတာတောင် ဝင်ပြီးတော့ မန်းဖြစ်အောင်မန်းလိုက်သေးတယ်
ယနေ့ 2011 ဧပြီလ ယိုးဒယားချဲ 136 ထွက်ပြီးသည့်အချိန်ထိ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍတွင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၂၀ ကျော် နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အများဆုံး တရုပ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ သယံစာတ တွင်းထွက်များရှာဖွေခြင်းကို
အထူးဦးစာပေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ကာ အခြေခံလူတန်းစားများတွက်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ ရရှိစေသည်များတွင်
ထိုသယံစာတလုပ်ငန်းများ ရှာဖွေခြင်းကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ ဥယျဉ်ခြံမြေ လယ်ယာများစွာကို
ကြီးမားသည့် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှုများကိုလည်း ကျူးလွန်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နိုင်းငံတစ်နိုင်ငံ၏ ကုန်စည်စီးဆင်းရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွက် လောင်စာဆီများလိုအပ်မှုသည်လည်း အပါဝင်ဖြစ်သည့်အလျှောက်
ပြည်တွင်းရေနံချက်စက်ရုံများမှ လောင်စာပို၍ချက်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ် နေပြီး
တွင်းထွက်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများကို သိပ်ဦးစားပေးမည်မဟုတ်ဘဲ
အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဦးစားပေမည့်သဘောကို အရိပ်အရောင်ပြနေသည်ဟု မှတ်ချက်သုံးသပ်ပါသည်။
ရေဓာတ်ငွေ့ဖြင့် သင်္ဘောများ မောင်းနိုင်တော့မည် – ရန်ကုန်
သင်္ဘောများအား ရေဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ပူးတွဲမောင်းနှင်ရန် မြန်မာ့စွမ်းအင်သစ်အဖွဲ့က စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ရေဓာတ်ငွေ့ထုတ်ကိရိယာကို နည်းပညာအကြောင်း သိနားလည်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းလောက်သာ အသုံးပြုသင့်တယ်။ ဂရုတစိုက်သုံးရမယ်။ အသုံးပြုတဲ့ သူက စည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ ငါးဖမ်းသင်္ဘောမှာ ဒီဇိုင်းထုတ်တယ်ဆိုပေမယ့်လဲ သင်္ဘောရဲ့ အင်ဂျင်စက်ခန်းမှာ ဆေးလိပ်သောက်တာကိုတော့ တားမြစ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
တခြားတပ်ဆင်ချင်တဲ့ သင်္ဘောတွေရဲ့ အင် ဂျင်စက်ခန်းတွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရ လို့ တားမြစ်ထားရင် အဲဒီသင်္ဘောတွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုဖို့ များပါတယ်”ဟု မြန်မာ့ စွမ်းအင်သစ်အဖွဲ့မှ သုတေသနပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာဦးကျော်ကျော်က ဆိုသည်။
”စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားပုလဲမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကလဲ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးစက် ကို တပ်ဆင်ဖို့အတွက် ပုံစံထုတ်လုပ်ပေးရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံလာပါပြီ။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးဆိုရင်လဲ ဆန်စက်တွေမှာ ရေ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ဖို့ စုံစမ်း မေးမြန်းလာကြတာ ဆန်စက် ရှစ်လုံး၊ ကိုး လုံးရှိပါပြီ”ဟု သုတေသနပညာရှင် အင်ဂျင် နီယာဦးကျော်ကျော်က ဆက်လက် ပြော ကြားသည်။
လွှတ်ပေးမည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၆၅ ဦး တွင် ကို မင်းကိုနိုင်၊ ကိုဇာဂနာ၊ကိုဇော်သက်ထွေး နှင့် ကိုမျိုးမင်းဇော် ကို့ ပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိ
ရန်ကုန်မှာ လိုင်းကားတွေ၊ ကြားကားတွေ စီးတုန်းက လူမပြည့်မချင်း မထွက်တတ်လို့ ခရီးသည်နဲ့ ကားစပယ်ယာတို့ မကြာ မကြာ ဆူကြ ပွက်ကြတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ ခပ်ရွတ်ရွတ် ခရီးသည်တွေက ဘယ်လို ခနဲ့သလဲဆိုတော့ “ကားဘယ်တော့ ထွက်မလဲဆိုတော့ … အခုထွက်မယ် … တော်ကြာ ထွက်မယ် … ထွက်ချင်မှ ထွက်မယ်” တဲ့။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်လာပြီးကတည်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကိစ္စဟာလည်း ခုန စကားနဲ့ပဲ ပြောရတော့မလိုပါဘဲ။ “အခု လွှတ်မယ် … တော်ကြာ လွှတ်မယ် … လွှတ်ချင်မှလည်း လွှတ်မယ်”။
အခု AFP သတင်းဌာနက အစိုးရသစ်ဟာ အကျဉ်းသားတချို့ကို လွှတ်ပေးမယ်လို့ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတဦးကို ကိုးကားပြီး ရေးပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ပါ၏၊ မပါ၏ကတော့ မသိပါ တဲ့။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကို တက်ဖို့ လာမယ့် ကြာသပေတေးမှာ သွားရမှာပါ။ သမ္မတဖြစ်ပြီးနောက် ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်ပါ။
“သမ္မတရဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ် ကာလဝန်းကျင်မှာ အကျဉ်းသား တချို့ကို လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်” လို့ အရာရှိတဦးကို ကိုးကားပြီး AFP သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မပါပါဘူး။
မြန်မာပြည်က ထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၂၂၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက တခြား ရာဇဝတ်ပုဒ်မတွေနဲ့ အကြောင်းပြ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတာကတော့ လွှတ်မယ့် အထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဘယ်နှဦး ပါမလဲ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်နီး လို့ ခေါ်တဲ့ လွတ်ခါနီးလူတွေကိုပဲ ဟန်ပြ လွှတ်မလား၊ တကယ့်ခြေတလှမ်း တရပ်အနေနဲ့ လွှတ်သင့် လွှတ်ထိုက်သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မလားဆိုတာကတော့ မကြာမီ အဖြေပေါ်မှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လွှတ်ရင် လွှတ်တယ်လို့ မှတ်ဆိုပြီးပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
အစိုးရသစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရန်ပြင်ဆင်
ဧရာဝတီ Tuesday, 03 May 2011 12:08 သတင်းတိုများ .သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရသစ်က အကျဉ်း သား တချို့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွှတ်ပေးရန်ပြင် ဆင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းအစီအစဉ် အား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ပထမ အကြိမ် ခရီးစဉ်ဖြစ်သော ကြာသပတေးနေ့ ၌ သွားရောက်မည့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ခရီးစဉ်နှင့် အချိန်ကိုက် ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အစီအစဉ် ၌ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများ ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆိုသည် ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရကြောင်း အစိုးရ အရာရှိတဦးအား ကိုးကား၍ AFP သတင်းတွင် ရေး သား ထားသည်။ ဦးသိန်းစိန်သည် မေ ၇ – ၈ ရက် ၌ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အခုတလော မြန်မာပြည်သားတွေ အလွယ်လမ်းကနေ သူဌေးဖြစ် ကြံနေကြတဲ့ နှစ်လုံးထီက ထိုင်းနိုင်ငံ အထိတောင် ပြန့်နှံ့နေတယ်။ ဒီနှစ်လုံးထီ ဆိုတာလည်း ထိုင်း TV-9 (မြန်မာအခေါ် မျက်လုံးလိုင်း) လိုင်းမှာ လွှင့်ပေးနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲ့ စတော့ အိပ်ချိန်းဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ ငြိမ်သွားချိန်မှာ ပေါ်လာတဲ့ဂဏန်းကို အတည်ယူကြတာ ဖြစ်တယ်။ SET Index ရဲ့ ဒသမ နောက်က ဂဏန်းနှစ်လုံးရဲ့ နောက်ဆုံးဂဏန်းကို ထိပ်စီးအဖြစ် ယူပြီး SET Value ရဲ့ ဒသမ ရှေ့ က နောက်ဆုံးဂဏန်းကို နောက်ပိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
ထိုင်းစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲမှာ တကြိမ်၊ ညနေ ၅ နာရီတကြိမ် ဈေးကွက်ပိတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနေ့ကို နှစ်ကြိမ် ကစားရတယ်။ တပတ်ကို ၁ဝ ကြိမ် ကစားတယ်။ တလကို ၄၂ ကြိမ်ကနေ ၄၆ ကြိမ်အထိ ကစားတယ် ။ စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်တော့ ဈေးကွက်ပိတ်လို့ မကစားကြပါဘူး(တခါတရံ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်မျိုးတွေလည်း ဈေးကွက် ပိတ်ပါတယ်)။
နှစ်လုံးထီ ၁ဝ ဖိုး ပေါက်ရင် ၈ဝဝ ရတယ် ဆိုပေမယ့် သုည နှစ်လုံးကနေ ၉၉ အထိ အကွက် ၁ဝဝ ဆိုတော့ ပေါက်ဖို့လည်းခက်တယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်လုံးထိုးစားတဲ့ သူတွေက အကွက်ပေါင်း နှစ်ဆယ်-သုံးဆယ်လောက် ထိုးတယ်။ အလုံးပတ်ထိုးတယ်။ လွဲတဲ့ အခါလည်း လွဲ၊ ပေါက်တဲ့ အခါလည်းပေါက်တဲ့ အကွက်တရာမှာ တကွက်သာ ကံစမ်းမဲ ပေါက်မယ့် အစီစဉ်ပေါ့။
တကယ်တော့ ဒီ ဒသမရဲ့ ရှေ့/နောက်က ဂဏန်းတွေဟာ ထိုင်းဘတ်ငွေ သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အစွန်းထွက် တွေပါ။ ကြိုတင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွက်တဲ့သူကလည်း တွက်တယ်။ ပေါက်တဲ့အခါတော့ တွက် နည်း မှန်တယ်ပေါ့။ မပေါက်တော့လည်း ဂွင်ဖေါက်တယ်ပေါ့။ အိပ်မက် ဂဏန်းက ရှိသေးတယ်။ တပတ်မှာ နှစ်ရက်ပဲ မမက်တာ ကျန်တဲ့ ၅ ရက်လုံး မက်တယ်။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် သူတို့မှာ ဆင်ခြေတွေတော့ အများကြီး။
နောက်ပြီး နှစ်လုံးထီအတွက် ထုတ်တဲ့ ချိုင်း–တဲ့။ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက ထုတ်လဲမသိဘူး။ ပေါလိုက်တဲ့ချိုင်း သထုံ ဆရာတော်ချိုင်း၊ မီးလွတ်ဆရာတော်ချိုင်း၊ ဘုန်းရောင်၊ မနောမယလက်ဆောင်၊ ရွှေပေါ်ကျွန်း၊ ရွှေပါးစပ်၊ သန္တာ၊ (စ-မ) စုံနေတာပဲ။ ဒီချိုင်းထုတ်တဲ့သူတွေက တကယ်တော့ စက္ကူကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ရောင်းစားတဲ့ သူတွေပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် စတော့ဈေးကွက်ရဲ့ ရှယ်ယာရှင်တွေလည်းမဟုတ်။ အကြားအမြင် ရတဲ့သူတွေလည်း မဟုတ်။ လူတွေရဲ့ အားနည်း ချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လိမ်စားနေကြတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ သုည ကနေ ၉၉ အထိ အကွက် ၁ဝဝ ပဲ ရှိတာ။ သူတို့ ချိုင်းတွေထဲက ဂဏန်းတွေက အကွက်ပေါင်း နှစ်ရာ၊ သုံးရာ ကျော်နေပြီ။ တနေရာမဟုတ် တနေရာမှာတော့ သွားမှန် နေမှာ ပေါ့။
ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ ဒီလိုချိုင်းမျိုးတွေ တကယ် ထုတ်နေကြတာလား။ လူတွေကပဲ ဘုန်းကြီး နာမည်တွေ အလွဲသုံးစား လုပ်နေ ကြတာလား မသိတော့ပါဘူး။
စာလိမ်တဲ့။ (ဂဏန်းတွေကို ၄ လိုလို ၅ လိုလို ၉ လိုလို ၆ လိုလို လိမ်ပတ် ခွေထားတယ်) ဖြေတဲ့သူကလည်း ဖြေတာပဲ။ ပြီး.. တလွဲကြီးပဲ။ တကယ် အတိအကျသိမှတော့ ဘယ်သူက စာလိမ်တော့မှာလဲ၊ ဘယ်သူက ချိုင်းတွေ ထုတ် ကြတော့မှာလဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိုးစားလို့ ဒိုင်တွေတောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ချဲထီလောကတောင် ပျောက်ကွယ် သွားမှာ သေချာတယ်။
ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက “မထွက်ရင်လျှာဖြတ်၊ ၉ တလုံး ပတ်မလွဲပဲ၊ ဒီအပတ် ၈- ဘိုင်သေပဲ(ကျိန်းသေ ပေါက် ပဲ)ဟေ့” လို့ ဘိုးတော်သံ လိုလို ၊ ဘာလိုလိုနဲ့၊ ပေးလိုက်တဲ့ အတိတ်တွေကလည်း ကိုကြီးကျော် အလွန်ဆိုး၊ အမဲရိုး ဟင်းအိုးမှအားမနာ၊ ကုန် သမျှကို ၆ တလုံးနဲ့ကယ် စုံနေတာပဲ။ ဒီကြားထဲ ပတ်ဂဏန်း၊ မွေးဂဏန်းနဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အိုးပေါင်၊ အိမ်ပေါင်၊ ခြံပေါင်နဲ့ အကြွေးတွေ မဆပ်နိုင် လင်နဲ့မယား စကားတွေများ ရန်တွေဖြစ်၊ သူခိုးဂျပိုးတွေပေါ၊ လုယက်၊ ခါးပိုက်နှိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော။
အတွေ့အကြုံတခုပြောပြအုံးမယ်။ လူတယောက်က အလုံးပတ်ကို ဆတိုး ထိုးတယ်။ အလုံးပတ် ဆိုတာကလည်း သုည ကနေ ကိုး အထိ ကြိုက်တဲ့ နံပါတ်တခုကို အပါ လောင်းတာ။ တစ်လုံးကို ၁၉ ကွက် ရှိတယ်။ ဆတိုး ဆိုတာက ၂ဝ ဖိုး မပေါက်ရင် ၄ဝ ဖိုး၊ ၄ဝ ဖိုးမပေါက်ရင် ၈ဝ ဖိုး အဲဒီလို တိုးပြီး ထိုးသွားတာ။
အစ ပထမရက် နံနက်ပိုင်း ၂ဝ ဖိုးပတ်တယ်။ ၁၉ ကွက်ဆိုတော့ ၃၈ဝ ဖိုး၊ မပေါက်ဘူး။ ညနေ ၄ဝ ဖိုးပတ်တယ်။ မပေါက်ပြန်ဘူး။ ၇၆ဝ ကုန်သွားတယ်။ မနက်ကငွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် ၁၁၄ဝ ကုန်သွားတယ်။ နောက်နေ့ ထပ်ပတ် တယ်။ မပေါက်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပတ် လာလိုက်တာ ကြာသပတေး ညနေကျတော့ ကုန်တဲ့ငွေ က များနေပြီ။ ဒိုင်လုပ်တဲ့ သူကလည်း ငွေတွေ မြှုပ်ထားရတော့ ငွေနည်းနည်း လိုတယ်။ အပတ်သမားဆီက နည်းနည်းရမလား တောင်းကြည့် တယ်။ တပတ်ရှင်း ပြောထားလို့ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ထားတဲ့ ငွေ က တသိန်းနား ကပ်နေပြီဆိုတော့ ဒိုင်လည်း မခံနိုင်တော့ဘူး။ ယုံလည်း မယုံတော့ဘူး။ တကယ်တော့ ထိုးသားလည်း အဲ့ဒီလောက်ငွေ မရှိပါဘူး လိုက်ရင်း၊ လိုက်ရင်းနဲ့ နစ်နေလို့ အရင်းလေးပဲ ပြန်ရအောင် မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ပတ်နေတာ ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အပတ် သမားကလည်း တနင်္ဂနွေပေး မယ်။ ဒိုင်းကလည်း မလိုချင်ဘူး အခုချပေးနဲ့ စကား များရာကနေ တုတ်ဆွဲ၊ ဒါးဆွဲ ဖြစ်ကုန်ကြရော။ နောက်တော့ ကြားက ဝင်ရှင်းပေးလို့ ဒိုင်ကလည်း တနင်္ဂနွေ စောင့်မယ်။ ထိုးသားကလည်း ဆက်မထိုးတော့ဘူး အကုန် ပေးမယ်လို့ ကတိတွေ ပေးတယ်။ တနင်္ဂနွေကျတော့ ထိုးသားက မရှိတော့ဘူး ထွက်ပြေးသွားပြီ။ ထိုးသားပြေးတော့ ဒိုင်ကလည်း တခြားသူ တွေကို လျော်ရမှာ လျော်စရာမရှိ ဖြစ်လို့ ထွက်ပြေး ပြန်တယ်။ အဲဒီလို ထိုးသားရော ဒိုင်ပါ ပြေးကြလို့ အခြားသူတွေကိုပါဂယက် ရိုက်ပြီး ကမောက်ကမ ဖြစ်ကြရတဲ့ အဖြစ်မျိုးလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။
ပိုက်ဆံကို အလွယ်လမ်းက လိုက်လို့ ဘဝပျက်ခဲ့တဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်လို့ ရန်တွေ ဖြစ်၊ လူသတ်မှု အထိ ဖြစ်တာ အများကြီး။ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေတောင် ဘဝပျက်သွားကြတာ မမြင်ချင်မှ အဆုံး။ ရှိ တာအကုန် ထိုးဆပ်ပြီး လမ်းဘေးရောက်သွားတဲ့ သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို လူတွေမမြင်တာ မဟုတ်၊ မြင်တယ်။ ဘာလို့လုပ်နေကြသလဲ။ အလုပ်တွေကရှား၊ ရှိတဲ့ အလုပ်ကလည်း လစာက မလောက်ငှ၊ နေ့တဓူဝ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေဖို့ အလွယ်လမ်းကို လိုက်ရင်း သောက် လေ သောက်လေ ငတ်မပြေ ၊ ပင်လယ်ဆားငံရေသောက်ရသလိုပဲ။ လိုက်လေဝေးလေ ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။
အစိုးရကလည်း ဒီကိစ္စကို သေချာကြပ်မတ်ပြီး ကိုင်တွယ်လို့ ရပေမယ့် နိုင်ငံရေး မလုပ်ရင်ပြီးရောသူ့သဘောနဲ့ သူ နေချင် သလိုနေ၊ ဒီသံသရာထဲမှာ မျောချင်သလိုမျော ဆိုပြီး လွှတ်ထားတယ်။ လူတွေဆင်းရဲ မွဲတေတာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်နှလုံး နွမ်း ကြေကုန်တာ၊ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားလာတာတွေဟာ ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်စိုးနေတဲ့ အစိုးရမင်းများ အနေနဲ့ ငါတို့မှာ တာဝန်ရှိပါလား ဆိုတာကော စဉ်းတောင် စဉ်းစားကြည့်ပါလေစ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော မဟုတ် လား။
လူတွေကို ပိုဆင်းရဲ၊ ပိုကျပ်တည်း သွားစေတဲ့၊ အကျင့်စာရိတ္တ ပိုပျက်စေတဲ့ ဒီနှစ်လုံးထီ လောကကြီး ပပျောက်သွားပါစေလို့သာ ဆုတောင်းမိပါတော့တယ်။
( တစ်ကယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာချင်ရင်တော့
http://myanmargazette.net/35926/business-economy ကို သွားပေတော့ )
လွှတ်တော့ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ တစ်ကယ့် ဆိုးမိုက်ပေတေ တဲ့ ဂျပိုး သူခိုးတွေ ချည်း ထွက်ထာတာ မြင်ရတယ် ။